ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाएका छौं « Tulsipur Khabar
ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाएका छौं
निर्वाचन एकदम नजिकमा आई सक्यो शन्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
शान्ति सुरक्षाको अवस्था एकदमै राम्रो छ । जिल्लाको भौगोलिक बनावट, मतदान स्थलको अवस्था बुझेर नै केन्द्र र जिल्लाको सुरक्षा रणनीति अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मतदान केन्द्रको सुरक्षा हो । हजुरहरुले बाटो–बाटोमा पनि प्रहरी त्यति देख्नुभएको छैन होला । त्यो बाटोमा भएको पुलिस पनि सबै मतदान केन्द्रमा नगएर हामीले चौबिसै घन्टा मोबाइलबाट सबै ठाउँ कभर गर्ने गरेका छौं । अहिले हाम्रो २४ वटा मोबाइल टोली छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा तीनवटा, नगरपालिकामा चारवटा र उप–महानगरपालिकामा पाँचवटा प्रहरीको मोवाइल टोली छ, त्यसैगरी सशस्त्र, नेपाली सेनाको मोवाइल टोली पनि अहोरात्र घुमि राखेको छ । सादा पोशाकमा पनि प्रहरी खटिएका छन् । सुरक्षा हाम्रो कन्ट्रोलमा छ । तर पनि ‘हन्ड्रेड प्रसेन्ट’ सुरक्षा छ भनेर त भन्न सकिदैन । तरपनि हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौं ।
पछिल्लो समय छिटपुट रुपमा घटना घट्न थालेपछि सुरक्षा शैली परिवर्तन गरियो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
परिवर्तन भएको छैन । मतदान स्थलहरु पहिलेकै ठाउँमा छन् । हामीले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेका छौं । मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र बाहिरी पेरिमिटरमा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिइरहेको छ । हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरेका छौं । कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । केहि मतदान केन्द्रहरु भौगोलिक रुपमा दाङका जटिल ठाउ“मा छन । ती मतदान केन्द्रको थप के छ ? भौगोलिक विकटता पनि छ । हजुरहरुलाई थाहा नै छ, दाङ जिल्लामा तराई पनि छ, पहाड पनि छ, विकट पनि छ । जस्तै दुई खोलीदेखि माथि सवारीकोट, कमिरेचौर र पश्चिम दाङको गंगटेपनि छ । कोइलाबास जस्तो विकट ठाउँसम्म फैलिएको छ । यो विविधताले भरिपूर्ण जिल्ला पनि हो । निर्वाचन नभएसम्म संवेदनशील ठाउँ नै हो । छवटा मतदान स्थललाई हामीले संवेदनशीलको वर्गीकरणमा राखेका छौं । अघि पनि मैले भने ती मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि प्रहरी, सशस्त्र र नेपाल आर्मीले सुरक्षा दिन्छन् । हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौ ।
कुनै पनि ठाउ“मा शंकास्पद गतिविधि भयो अथवा घटना घट्यो भने प्रहरीलाई कसरी खबर गर्न सकिन्छ ?
प्रहरीलाई तुरुन्त १०० मा छिटोभन्दा छिटो खबर गर्न सकिन्छ । यदि व्यस्त भयो भने पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा मेरो मोवाइल नम्बर ९८५७८०५५५५ मा पनि खबर गर्नुसक्नुहुन्छ । सजिलो भनेको १०० नै हो । यदि शंकास्पद वस्तु भेटियो, देखियो भने नचलाउने, नछुने र प्रहरीलाई तत्काल खबर गर्न सकिनेछ ।
नागरिकहरु त्यसो भए मतदान स्थलसम्म गएर ढुक्क भएर मतदान गर्न सक्ने अवस्था छ ?
निर्वाचन बिथोल्ने गिरोहसँग हाम्रो कुनै सम्झौता हुँदैन । त्यस्ता केहि तत्वलाई हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेका छौं । हाम्रो एकजना म्यादी प्रहरीको बिनाकारण ज्यानैसम्म गएको छ । त्यस्तो तत्वसँग हामीले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनांै । तर पनि म नागरिकहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने ढुक्क भएर मतदान गर्न जानुस् । सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ।
अन्तमा केहि भन्नुछ ?
यो ऐतिहासिक निर्वाचन हो । अन्य निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन फरक छ । फरक के मानेमा छ भने अन्य निर्वाचन ‘रेगुलर’ पाँच वर्षमा आउँछ । यो २०७२ सालको संविधानलाई साकार पार्ने वा मूर्तरुप दिने निर्वाचन हो । यसपछि हाम्रो देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्नेछ । नयाँ काँचुली फेर्नेछ । संघीयताको मर्म पूरा हुनेछ अथवा सपना पूरा हुने छ । त्यसले गर्दा यो अवसर नगुमाएर आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई यहाँहरुले निर्धक्क भएर मतदान गरौं । सुरक्षा अवस्थाप्रति शंका नगरौं भन्न चाहन्छु ।